Ndi otu ndi ahia gha agha Blog? | Martech Zone
Ndi otu ndi ahia gha agha Blog?
Friday, July 6, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Emechara m hụ nsonaazụ si Ike ire na dị nnọọ banyere nwere ọrịa strok mgbe m hụrụ nsonaazụ ya. Ajụjụ bụ Kwesịrị Ndị Otu Ahịa Blog? Lee nsonaazụ ndị a:
Ị na-egwusa m egwu? 55.11% nke ụlọ ọrụ machibido ndị ahịa ha ịde blọgụ? Nke mbụ niile… ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe gbasara ụlọ ọrụ m na-eche maka azụmaahịa ya, nke ahụ ezuola ịgbanwe obi m. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Ime ihe n'eziokwu - N’ụzọ ebumpụta ụwa, nke a pụtara na ndị ahịa agaghị atụkwasị obi n’ịkparịta ụka na ntanetị. Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, ha nwere ike ọ gaghị na-ekwurịta okwu n'eziokwu na offline.
n'ọnọdu - Ọ bụrụ n ’otu ndị mmadụ nọ n’ime nzukọ gị ka emebere na blọgụ, ọ bụ ndị na - ere gị. Ndị ọrụ gị na-aghọta ọnọdụ nke ngwaahịa gị, asọmpi gị, ike gị, adịghị ike gị - ma ghọta etu esi emeso nzaghachi na-adịghị mma.
Ndị na-ege ntị - Ndị na-ege gị ntị nke blog gị bụ otu atụmanya ndị ahịa gị na-agwa kwa ụbọchị okwu!
Gị blog bụ onye na-ere ahịa. Atụmanya na-eleta blọọgụ gị na-achọ otu azịza na nyocha otu okwu ha ga - eme mgbe ha kpọrọ onye na - ere gị na ekwentị. For machibidoro ha bụ ihe nzuzu. Y’oburu n’itukwasighi obi ike na onye n’ire ahia gha dee edemede ya, ikwesighi itukwasi ha obi igwa olile anya.
Adịghị m adịgboroja, ka m bụ? Ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-echepụta ozi ahụ ma na-agbanye ika ahụ, ndị na-esote ndị ọzọ iji mechie azụmahịa ahụ bụ ndị ahịa gị. Adịghị m nzuzu, amaara m na enwere oge ị chọghị ka onye na-ere ahịa kwuo na blọgụ gị competition dị ka asọmpi badmouthing ma ọ bụ na-ere nnukwu atụmatụ na-esote nke na-apụ apụ… mana nke ahụ na-ewe ntakịrị ụzọ site na otu egwuregwu nkwukọrịta gị. .
Nke a bụ nnukwu ihe ọzọ kpatara mgbidi dị n’etiti ịre ahịa na azụmaahịa kwesịrị ịkwatu. Ka anyi tufuo CMOs na VP nke Ahịa ma gaa na a Onye isi ndị nnata ego ebe atumatu di iche iche ma tinye ya - na ndi mmadu na-eme mkpebi a ga-aza ya maka nsonaazụ ego.
Tags: onye isi ahiaonye isi ngalaba na-ahụ maka ego na-akpataKeduịde blọgụ ahịaosote onye isi oche nke ahiavp nke ahịa
Gini kpatara Eji ahia ahia?
Jul 11, 2012 na 11: 01 AM
Iji zaa ma ire ahịa ọ kwesịrị ịbụ blog, azịza m sitere na Meg Ryan na "Mgbe Harry Zutere Sally." EE! EE! EE!